နေတိုး နှင့် စိုးပြည့်သဇင် အကယ်ဒမီ ဆုချီးမြှင့် ခံရ ၊အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်ဆု ချန်လှပ်ထားပြန် | The FNG
January 24, 2011 · by 21 South News	· in (unnamed), ဖျော်ဖြေရေး.	·
လွတ်လပ်ရေး နေ့ ကို အမှတ် ရစေသောအားဖြင့် လွတ်လပ်ရေး နေ့ တွင် မင်္ဂလာ ဆောင်မှု၊ မင်္ဂလာ အခမ်းအနား ကို "စိန်စီသောည" ထက် ကြီးကျယ်စွာ လုပ်မှုများကြောင့် အိန္ဒြာကျော်ဇင် မှာ ဆုမရှိ ခဲ့ဟု အင်တာနက် လူငယ် ကွန်ယက် ဖိုရမ်တွင် ဖော်ပြထား သည်။ ပုံတွင် ကြိုးကြာ တောင်ပံခတ်သံ ဇာတ်ကားမှ သရုပ်ဆောင် နှစ်ဦး ကို တွေ့ ရစဉ်
မြန်မာ ရုပ်ရှင် ထူးချွန် ဆု ဖြစ်သည့် အကယ်ဒမီ ဆုပေးပွဲ ကို ယနေ့ နေပြည်တော် လေဟာပြင်
ကဇာတ် ရုံ ဉ် ကျင်းပရာ အမျိုးသား ဇာတ်ဆောင် ဆု ကို သရုပ်ဆောင် နေတိုးက မိုးည အိပ်မက်မြူ
ဇာတ်ကား ဖြင့် ရရှိပြီး အမျိုးသမီးဇာတ်ပို့ဆု ကို သရုပ်ဆောင် စိုးပြည့်သဇင် က မိုးညအိမ်မက်မြူ
အကောင်းဆုံး အမျိုးသမီး ဇာတ်ပို့ ဆုရ စိုးပြည့် သဇင်
အကောင်းဆုံး ဇာတ်ကား ကို ဒါရိုက်တာ စင်ရော်မောင်မောင် ၏ ဆေးပညာ လောက
နောက်ခံ ကြိုးကြာတောင်ပံခတ်သံ ဇာတ်ကားမှ ရရှိပြီး အကောင်းဆုံးဒါရိုက်တာ ဆု
ကို ဒါရိုက်တာ မီးပွားက – ဇော်က ကနေ သည် ဇာတ်ကား ဖြင့် ရရှိသည်။
ယခု နှစ် တွင် အမျိုး သမီး ဇာတ်ဆောင် ကို လည်း ဆက်လက် မပေး ဘဲ ထားရှိခြင်း
ကြောင့် အမျိုးသမီး ဇာတ်ဆောင် ဆုရရှိ မည် ဟု တစ်ပြေး နေသည့် အိန္ဒြာ ကျော်ဇင်
နှင့် မိုးဟေကို တို့ ရရှိခဲ့ခြင်း မရှိ ဟု သိရသည်။
ရုပ်ရှင်တည်းဖြတ်ဆု ကို ဟံသာမြေကိုဇော်မင်း ရုပ်ရှင်ဇာတ်ညွှန်းဆု -ကို မြင့်ဦးဦးမြင့် က ကြိုးကြာတောင်ပံခတ်သံ ဇာတ်ကား ၊ ရုပ်ရှင်ဓာတ်ပုံဆု ကို ကိုကိုဌေး က အတိတ် ရဲ့ 
အရိပ် ဇာတ်ကား ဖြင့် ၎င်း ရုပ်ရှင်တေးဂီတဆု -ကို ဓီရာမိုရ် က ဇော်က ကနေသည်
ဇာတ်ကား ဖြင့် ၎င်း ရုပ်ရှင်အသံဆု ကိည ဆန်းဦး က အတိပ်ရဲ့အရိပ် ဇာတ်ကား ဖြင့်
ပင် ၎င်း ရရှိခဲ့သည်။
ယခု နှစ် အကယ် ဒမီ ဆုများ ကို ၂၀၀၉ ၊ ၂၀၁၀ ခုနှစ် တွင် ထုတ်လုပ် ခဲ့သည့် ဇာတ်
ကား ၁၆ ကား အနက်မှ ရွေးချယ် ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
← အော်ရီဂွန် ရံပုံငွေပွဲ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဗီဒီယို အမှာစကားပို့ 
နိုင်ငံခြားရေး ၀န်ကြီးဌာန ၀န်ထမ်းများ အပြောင်းအလဲ လုပ် →
12 responses to “နေတိုး နှင့် စိုးပြည့်သဇင် အကယ်ဒမီ ဆုချီးမြှင့် ခံရ ၊အမျိုးသမီး သရုပ်ဆောင်ဆု ချန်လှပ်ထားပြန်”
thein zaw htun March 15, 2011 at 5:34 pm · ·
သြော် ဒါနဲ. စိုးပြည့်ရဲ. Ph- No နံပါတ်လေးသိရင်
p.t eye January 28, 2011 at 2:29 pm · ·
myanmar movies industrial isajoke. 16 movies inayear?? that’salittle more than one movieamonth. so easy to get academy if u r popular actor. if u r popular and u r main character in4movies for that year u have 25% chance of winning. i miss the time of real great actors like kyaw thu, win oo, etc.. era. these days mm movies has no real value. i haven’t see any mm movie for over 15 years already
right more thyan words !
we can never seen or watched any real and natural action in all of the myanmar movies in case, if the scene in the film is on the other side of the rule that the government pleases, any actor or actress will miss the academy award however he or she played perfect the most …………
Zar January 26, 2011 at 3:21 pm · ·
mg mg January 24, 2011 at 3:18 pm · ·
soe relatives are living in field myanmar movies.
naytoecrazy January 24, 2011 at 11:21 am · ·
ko nay toe…..congratulation par.I am so happy for you win the academy.But you should be at least2prizes for 2009 because your six movies includes4movies(Drama).These4movies(drama) are kyoekyar,zawkakanaythi,marmechin and moenya.So,you should achieve the academy at least2prizes.You are so good at acting such as drama,comics,fighting,action,classical.You are the best actor of myanmar.Nay toe can able any acting.I like ko nay toe’s style and actings.Ko nay toe has own style not the same another actors.He does not copy of another actors.He is so handsome and so famous of myanmar.Congratulation for winning the academy.May you achieved the success always.
amhantayarko January 24, 2011 at 11:16 am · ·
“‘အကယ် ဒမီဆုရရှိဖို့ ဆိုရင် သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဟာ အရည်အချင်းရှိရုံနဲ့မပြီးသေး၊ ထိုက်တန်မှုရှိမှသာ ရရှိမှာပါတဲ့လေ .. ထိုက်တန်မှုရှိမရှိဆိုတာက …. ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ထင်ပါသလဲ …. ဖားတတ်မှ ၊ ဖားလိုပွှဲုံးအွင်ကလွဲရင် တခြားမအော်တတ်မှ … ငြိမ်ငြိမ်နေတတ်မှ …. စသည်စသည်ပေါ့လေ ……. ဟားဟား”
linlartakar so tat kg..pharr tine thar ya may so yin lwin moe lae ya mhar pot…har tha kar so yin bay lauk pae pharr pharr min amay loe lot ya mhar lar?min ka nay toe ya tar ko ma nar lo lot pyaw tar lar?lee pae kor…nay toe haranae sone2su lauk ya thint tar ….yoke shin karr ma yike pae nat pharr tine ya may so yin min amay pharr khaine like par lar/
naytoecrazy January 24, 2011 at 11:11 am · ·
naytoecrazy January 24, 2011 at 11:07 am · ·
Maung Gyi January 24, 2011 at 9:44 am · ·
Eindra Kyaw Zin ကတော့ ပျော်ရွှင်မှုနဲ့ ၀မ်းနည်းမူပါ တစ်ပြိုင်နက်တည်းခံစားရပြီ…
မိုးစက်မုန်တိုင်း January 25, 2011 at 9:33 pm · ·
ဟုတ်တယ် စိုးပြည့်သဇင်လဲတော်တာပဲ ။ သူကမိုးဟေကိုတို့လိုလိုးရှင်းလိမ်းတာတွေဖူးလို့လား
အူဝဲလိုလဲ အာကာမိုးမြင့် ။တို့နဲ့နာမည်ထွက်ဖူးလို့လား။
linlatarkar(bk) January 24, 2011 at 9:16 am · ·
အကယ် ဒမီဆုရရှိဖို့ ဆိုရင် သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်ဟာ အရည်အချင်းရှိရုံနဲ့မပြီးသေး၊ ထိုက်တန်မှုရှိမှသာ ရရှိမှာပါတဲ့လေ .. ထိုက်တန်မှုရှိမရှိဆိုတာက …. ဘာနဲ့ဆုံးဖြတ်တယ်ထင်ပါသလဲ …. ဖားတတ်မှ ၊ ဖားလိုပွှဲုံးအွင်ကလွဲရင် တခြားမအော်တတ်မှ … ငြိမ်ငြိမ်နေတတ်မှ …. စသည်စသည်ပေါ့လေ ……. ဟားဟား
Up to top January 24, 2011 at 5:44 pm · ·
ဥပမာ ဓီရာမိုရ်တို့ ဒါရိုက်တာမီးပွားတို့ နေတိုးတို့ ဟံသာမြေကိုဇော်မင်းတို့လိုလူတော်တွေအများကြီး
၀တ်မှုန်ရွှေရည် ရဲ့လက်တွဲဖော်က ဖိုးလပြည့် မဟုတ်တော့
PlayStation Vita အတွက် သာ ကနဦး ရည်ရွယ် ထုတ်လုပ် သည့် Call of Duty
မန္တလေး နှစ် ၁၅၀ ပြည့် အတွက် တင်ဆက်မည့် အစီအစဉ် အချို့အား အာဏာပိုင်တို့ ကတားမြစ်မှုပြုလုပ်
ဒင်ဗာ ဘုန်းတော်ကြီးကျောင်း ဖွင့် ပွဲ သီတဂူ ဆရာ တော် ကြွရောက် ချီးမြှင့်